Mateo Asɛmpa No 12:1-50
Yesu ne “Homeda Wura” (1-8)
Ɔsaa ɔbarima bi a ne nsa awu yare (9-14)
Onyankopɔn akoa a ɔdɔ no (15-21)
Ɔde honhom kronkron na etu ahonhommɔne (22-30)
Bɔne a wɔremfa nkyɛ (31, 32)
Dua aba na wɔde hu dua ko (33-37)
Yona sɛnkyerɛnne (38-42)
Sɛ honhom fĩ san ba a . . . (43-45)
Yesu maame ne ne nua mmarima (46-50)
12 Saa bere no, Yesu kɔfaa hwiit* afuw mu Homeda. Ɔkɔm dee n’asuafo no, na wofii ase tetew* hwiit mmɛtem no bi wee.+ 2 Bere a Farisifo no huu eyi no, wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! W’asuafo no reyɛ biribi a mmara mma kwan sɛ wɔyɛ no Homeda.”+ 3 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea Dawid yɛe bere a ɔkɔm dee ɔne mmarima a wɔka ne ho no, monkenkanee?+ 4 Dawid kɔɔ Onyankopɔn fi, na ɔne ne mmarima no dii paanoo a wɔde ba Onyankopɔn anim no.*+ Ná mmara mma kwan sɛ ɔno anaa wɔn a wɔka ne ho no di bi, gye asɔfo no nko ara.+ Saa asɛm no, monkenkanee? 5 Anaa monkenkanee wɔ Mmara no mu sɛ, edu Homeda a, asɔfo a wɔwɔ asɔrefi hɔ no bu Homeda no so nanso wonni fɔ?+ 6 Nso mereka akyerɛ mo sɛ, nea ɛso sen asɔrefi no wɔ ha.+ 7 Nanso asɛm a ɛne, ‘Mepɛ mmɔborɔhunu+ na ɛnyɛ afɔrebɔ’+ no, muhuu nea ɛkyerɛ a, anka moammu wɔn a wɔn ho nni asɛm no fɔ. 8 Efisɛ Onipa Ba no ne Homeda Wura.”+ 9 Bere a ofii hɔ no, ɔkɔɔ wɔn hyiadan mu. 10 Na hwɛ! ná onipa bi wɔ hɔ a ne nsa awu!*+ Afei nea ɛbɛyɛ na wɔabɔ no sobo no, wobisaa no sɛ, “Mmara ma kwan sɛ wɔsa yare Homeda?”+ 11 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo mu hena na sɛ ɔwɔ oguan baako na ɔtɔ amoa mu Homeda a, ɔrenso ne mu nyi no mfi mu?+ 12 Onipa ho hia koraa* sen oguan! Enti mmara ma kwan sɛ wɔyɛ adepa Homeda.” 13 Ɛnna ɔka kyerɛɛ onipa no sɛ: “Teɛ wo nsa.” Na ɔteɛe, na ɛsan yɛɛ yiye te sɛ ne nsa baako no. 14 Nanso Farisifo no pue kɔbɔɔ ne ho pɔw sɛ wobekum no. 15 Bere a Yesu huu saa no, ofii hɔ kɔe. Nnipa bebree nso dii n’akyi,+ na ɔsaa wɔn nyinaa yare. 16 Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnhwɛ na wɔamma nkurɔfo anhu onipa ko a ɔyɛ,+ 17 na ama nea wɔnam odiyifo Yesaia so kae no aba mu. Ɔkae sɛ: 18 “Hwɛ! M’akoa+ a mayi no, nea medɔ no a magye no atom!*+ Mehwie me honhom agu no so,+ na ɔbɛma amanaman no ahu nea atɛntrenee kyerɛ pefee. 19 Ɔne obi renham,+ na ɔrenteɛteɛm, na obiara rente ne nne wɔ mmɔnten so. 20 Ɔremmu demmire* a abukaw biara mu, na ɔrennum ntamaban a ɛrefi wusiw biara,+ kosi sɛ ɔbɛma atɛntrenee aba baabiara.* 21 Nokwarem no, amanaman de wɔn ani bɛto ne din so.”+ 22 Afei wɔde ɔbarima bi a ɔwɔ honhommɔne a ɔyɛ onifuraefo ne mum brɛɛ no, na ɔsaa no yare maa ɔbarima a ɔyɛ mum no kasae, na ohuu ade. 23 Na nnipadɔm no nyinaa ho dwiriw wɔn, na wofii ase kekae sɛ: “Ɛnyɛ oyi ne Dawid Ba no?” 24 Bere a Farisifo no tee eyi no, wɔkae sɛ: “Ɛnyɛ hwee na saa damfo yi de tu ahonhommɔne sɛ Beelsebub,* ahonhommɔne panyin no.”+ 25 Bere a ohuu wɔn adwene no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ahenni biara a ɛko tia ne ho no bɛsɛe, na kurow anaa ofi biara a ɛko tia ne ho no rennyina. 26 Enti sɛ Satan tu Satan a, na ɔreko atia ne ho. Ɛnde, ɛbɛyɛ dɛn na n’ahenni agyina? 27 Bio nso, sɛ mede Beelsebub na etu ahonhommɔne a, mo mma* de hena na etu wɔn? Eyi nti, wobebu mo atɛn. 28 Na sɛ mede Onyankopɔn honhom na etu ahonhommɔne a, ɛnde na mo ne Onyankopɔn Ahenni abɔ nsianho.+ 29 Anaa ɛbɛyɛ dɛn na obi atumi abɔ awura ɔhoɔdenfo bi fi akogye ne nneɛma? Gye sɛ odi kan kyekyere ɔhoɔdenfo no ansa na watumi asesaw nneɛma a ɛwɔ ne fi. 30 Obiara a onni m’afã no, ɔsɔre tia me, na obiara a ɔne me mmoaboa ano no, ɔhwete.+ 31 “Eyi nti mereka akyerɛ mo sɛ, wɔde bɔne ne abususɛm biara bɛkyɛ nnipa, nanso abususɛm a etia honhom no de, wɔremfa nkyɛ.+ 32 Ebi ne sɛ, obiara a ɔbɛka asɛm bi atia onipa Ba no, wɔde bɛkyɛ no,+ nanso obiara a ɔbɛkasa atia honhom kronkron no, wɔremfa nkyɛ no; wɔremfa nkyɛ no wiase yi* mu anaa nea ɛreba no mu.+ 33 “Sɛ mobɛma dua no ayɛ dua pa na n’aba ayɛ aba pa a, momma ɛnyɛ; sɛ nso mobɛma ayɛ dua bɔne na n’aba ayɛ aba bɔne a, momma ɛnyɛ, efisɛ dua biara aba na wɔde hu dua ko.+ 34 Nhurutoa* mma,+ mobɛyɛ dɛn atumi aka nsɛm a ɛyɛ papa bere a moyɛ abɔnefo? Efisɛ nea ayɛ koma mã no na ano ka.+ 35 Onipa pa yi adepa fi nneɛma pa a waboaboa ano mu ba, na onipa bɔne yi adebɔne fi nneɛma bɔne a waboaboa ano mu ba.+ 36 Mereka akyerɛ mo sɛ, asɛm biara a mfaso nni so a nnipa ka no, wobebu ho akontaa+ Atemmu Da no. 37 Efisɛ mo nsɛm so na wɔnam bebu mo bem, na mo nsɛm so na wɔnam bebu mo fɔ.” 38 Ɛnna akyerɛwfo ne Farisifo binom ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, yɛpɛ sɛ woyɛ sɛnkyerɛnne bi ma yɛhwɛ.”+ 39 Ɔmaa wɔn mmuae sɛ: “Awo ntoatoaso abɔnefo ne awaresɛefo* kɔ so hwehwɛ sɛnkyerɛnne, nanso wɔremma wɔn sɛnkyerɛnne biara, gye odiyifo Yona sɛnkyerɛnne no.+ 40 Na sɛnea Yona dii apataa kɛse no yam nnansa, awia ne anadwo no,+ saa ara na onipa Ba no bedi asaase yam* nnansa, awia ne anadwo.+ 41 Nnipa a wɔwɔ Niniwe ne awo ntoatoaso yi bɛsɔre atemmu bere mu, na wobebu awo ntoatoaso yi fɔ, efisɛ asɛm a Yona kae no ma wɔsakrae.+ Nanso hwɛ! nea ɔsen Yona wɔ ha.+ 42 Wobenyan anaafo fam hemmaa ne awo ntoatoaso yi aba atemmu no mu, na obebu wɔn fɔ, efisɛ ofi asaase ano betiee Solomon nyansa.+ Nanso hwɛ! nea ɔsen Solomon wɔ ha.+ 43 “Sɛ honhom fĩ bi fi obi mu a, ɔkɔfa asaase a ɛso awo so, na ɔhwehwɛ homebea, nanso onnya bi.+ 44 Afei ɔka sɛ, ‘Mɛsan akɔ me fi a mitu fii mu no mu’; sɛ obedu hɔ a, ohu sɛ obiara nni ofi no mu,* na wɔaprapra mu asiesie mu kama. 45 Afei ɔkɔ kɔfa ahonhom ason foforo a wodi bɔne sen no ka ne ho, na wɔba mu bɛtena hɔ, na saa onipa no awiei sɛe sen kan no.+ Saa ara na ɛbɛyɛ awo ntoatoaso abɔnefo yi nso.” 46 Bere a ogu so rekasa akyerɛ nnipadɔm no, ne maame ne ne nua mmarima+ begyinaa abɔnten hɔ, na na wɔpɛ sɛ wɔne no kasa.+ 47 Enti obi ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Wo maame ne wo nua mmarima gyina abɔnten, na wɔpɛ sɛ wɔne wo kasa.” 48 Ɛnna ɔka kyerɛɛ nea ɔkaa saa kyerɛɛ no no sɛ: “Hena ne me maame, na henanom ne me nua mmarima?” 49 Na ɔteɛɛ ne nsa kyerɛɛ n’asuafo no so kae sɛ: “Hwɛ! Me maame ne me nua mmarima ni!+ 50 Na obiara a ɔyɛ nea m’Agya a ɔwɔ soro no pɛ no, ɔno na ɔyɛ me nuabarima ne me nuabea ne me maame.”+
^ Anaa “pempan.”
^ Anaa “ɔne ne mmarima no dii paanoo a wɔde kyerɛ no.”
^ Anaa “adwudwo!”
^ Anaa “Onipa som bo.”
^ Anaa “ɔbɛma atɛntrenee adi nkonim.”
^ Ɛyɛ din bi a wɔde frɛ Satan.
^ Anaa “akyidifo; asuafo.”
^ Anaa “wɔn a wɔafi Onyankopɔn akyi.”
^ Nt., “asaase komam.”
^ Anaa “ofi no da mpan.”